Sonke Siyafuna elikuThixo — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Nantsi le evakalayo kwi intshumayelo kutshanje ndazishumayela kwiNdumiso 142. Sonke siye ngamaxesha anzima, kodwa ndumiso ibonisa ukuba nkqu amaxesha imbi ngayo yonke into ekufuneka kuThixo sifumana. Ezi ngongoma zine:
mna. UThixo Mhlobo Ngamaxesha Obunzima
Angie • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:39 mna • impendulo
Kubonakala ukuba le ntshumayelo wayevela kakhulu awhile kudala. I ndaphulaphula nje kuyo kwaye ndiyazi uThixo owondikhaphela kuyo. Ndandifuna ukuva lo myalezo. Ndiyabulela Nkosi. Sikelela wena nomfazi kid yakho Uhambo! Ndiyathandaza ukuba uYehova uqhubeka ukubonisa inceba yakhe phezu wena nosapho lwakho njengoko sihlale sithembekile kuye yaye lobizo lwakhe ubomi bakho.
Shakinah Smith • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:40 mna • impendulo
Makabongwe uThixo! Nguye yonke into ebendiyifuna. Lo myalezo kwenza kum ukucingisisa ukulunga kukaThixo nokuba mangaphi amaxesha aye ekuzukisekeni kwam ngaphandle kwamaxesha meko kunye ezinzima. Yena ke uhlala kunye nam yaye nam. Umthandazo wam ngoku ukuba uThixo uya kumnika nje kum amandla ukuya thru nantoni i kufuneka kuba ndiyazi ukuba ngubani na kum.
Anthony Chatmon • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:40 mna • impendulo
Ndayithanda myalezo, enkosi. Nceda uqhubeke ukuvumela uThixo ukuba akusebenzise. UThixo akusikelele wena eyakho.
Kenitra Brockington • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:40 mna • impendulo
Ndicinga ukuba mhle ngayo uThixo usibonisa amagqabantshintshi uthando lwakhe ngothando lwethu abantwana bethu. Ngokwenene ndalithanda Trip mzekeliso eyenziwe ekuqaleni kunye nonyana wakhe.
josephwalker • EtiMnga 13, 2013 ngexesha 1:46 mna • impendulo
uMzalwana uhambo, loo ntshumayelo waphiwa! la magama apho ilungelo ngexesha. Oku ngathi silibale ukuba ngokulula ngexesha ngamaxesha embandezelo eliphezulu nenkathazo. Oku isikhumbuzo.